Yiyiphi ingqondo epheleleyo yokwakha umkhankaso wokuthengisa i-intanethi?
Njalo xa ufuna ukuphakamisa ishishini lakho kwiwebhu kufuneka uqhube umkhankaso wokuthengisa intengiso kwi-intanethi. Akunangqiqo ukuba ungathanda ukuphakamisa iphrojekthi esanda kutsalwa okanye ukuphucula ukubonakala kwe-intanethi yexesha elide, kwiimeko zombini kufuneka uqalise nge-intanethi yokuthengisa i-Intanethi.Yindlela epheleleyo yokukhangela abathengi abatsha kwaye ufumane ukuqhutyelwa kwe-traffic rhoqo kwi-domain yakho - email road runner.
Ukuthengiswa okungekho mveliso yindlela yokuphromotha ebonakalayo ebhekisela ekudaleni umxholo wewebhu webhsayithi eliza kubangalisa ingqwalasela yabasebenzisi kwaye ibangenise ngolwazi olunokukunceda ukuxazulula imiba yabo.Isebenza kangcono kunokuba kubizwa ngokubandayo kunye nezinye iintlobo zokukhuthazwa kwamanye amazwe kunye nokusebenzisana nabaphulaphuli abajoliswe kuyo. Ukuze uphumelele kwihlabathi le-intanethi kwaye wenze ukuba ishishini lakho liphumelele, kufuneka usebenzise zonke izitishi zakho zedijithali ezifana newebhsayithi, iblogi, i-akhawunti yemidiya yoluntu okanye uluhlu lwe-imeyile. Zonke ezi zixhobo ziyakunceda ujolise kubathengi bakho abanakho kwaye ubaguqulele rhoqo.
Kule nqaku, siza kuxubusha ezinye iingcebiso ezibalulekileyo zokuphuhlisa isicwangciso esichengayo sokuthengisa ukwenza i-intanethi yakho iphumelele kwaye iphindwe kabini ingeniso yakho.
Izikhokelo zokudala umkhankaso wokuthengisa nge-intanethi
Kufuneka uqale ukuphuhlisa umkhankaso wakho wokuthengisa nge-intanethi ngokubeka iinjongo ezihlakaniphile. Kukho iinjongo ezi-5 eziphambili kwishishini ngalinye-elithile, elinganiselwe, elithengekayo, elifanelekileyo kunye nexesha.
Kubalulekile ukwazi iinjongo ezifezekileyo nezifikelelekayo kwi-intanethi yakho phambi kokuba uqale ukwakha isicwangciso sokuthengisa. Ukuba unemibono engacacanga okanye engaqondakaliyo, ayisoze yazaliseka kwaye uya kudana kwaye ayikwazi ukugxila kwiintlawulo ozifumene.
Yingakho iinjongo zakho kufuneka zithembele kwi-website ekhoyo yokuhlaziya idatha. Iimetrikhi zakho zewebhu ziyakunceda ukuba ufumane iinkalo eziphathekayo kwinjongo yakho yokugqibela.
Njengomthetho, bonke abaxhasi abadalwa ngokulinganayo. Udinga ukugxila kulabo abaya kufumana ixabiso kwimveliso okanye iinkonzo zakho kwaye baninzi bakhokelela. Musa ukuchitha ixesha lakho kwiklayenti yesikhathi esisodwa abaza kumthombo wakho wewebhu ngezinye iinkhathi. Ukwakha umkhankaso wokuthengisa we-intanethi, kufuneka ujolise kuhlobo oluthile lwabaxumi. Ukuqonda ukuba ngubani na othengi abanakho, kufuneka uchaze idatha malunga nabo. Ngokomzekelo, imvelaphi yabo, izibalo kunye nezinye izihlomelo ezithile. Hlanganisa zonke ezi nkcukacha ukuze ubone umfanekiso opheleleyo wabaphulaphuli bakho. Ngokwenza oku, uya kuqonda iingxaki zabo kunye neemfuno zabo.
Nika abathengi bakho abanokukwazi oko bafuna
kwaye yiziphi iingxaki abanayo, ngoku lixesha lokubabonelela ngesiphumo sokujoliswa kuzo. Udinga ukudala ezifanelekileyo kwiinjongo zamakhasimende akho ezinokubambulula iingxaki zabo kwaye uzenze zithembeke kwi-brand yakho. Ngokumisela umgangatho wemigangatho, ukhokela iindwendwe zakho kwiwebhusayithi ukuya kwinqanaba elilandelayo lempahla yokuthengisa. Unokubonelela ngevidiyo njani-ukuya kwi-step-by-step guide ukuze uqhube phambili ekuhambeni kwabo kumthengi.